KBZ Bank Jobs in Myanmar | JobNet.com.mm
No Employees :10001-20000
No,53,Coner of Merchant Rd & Bo Soon Pat Rd,Pabedan Township,Yangon, Myanmar
KBZ Bank jobs and Career Profile
All KBZ Bank Jobs
Technical Support (YGN )
Domestic Payment Assistant
Inward Remittance Assistant (Jr/Sr Assistant)
Junior Assistant (Outward Remittance)
Hot Jobs at KBZ Bank
ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် အသွင်မတူသည့် လုပ်သားအင်အားစုများကို စုစည်းပြီး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ရန်နှင့် အလုံးစုံပါဝင်သည့် လုပ်သားအင်အားစုကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပညာအရည်အချင်း၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် နှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီး လူမှန်နေရာမှန်ထားရှိနိုင်ရန်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
လူမျိူး၊ အသားအရောင်၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ကျား နှင့် မ၊ ကျား နှင့် မ ဖြစ်ခြင်းအပေါ်ခံယူချက် သို့မဟုတ် သဘောထား၊ မိမိရွေးချယ်သတ်မှတ်သည့် လိင်အမျိုးအစား၊ နိုင်ငံ၊ မသန်စွမ်းဖြစ်မှု၊ အသက်အရွယ်၊ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ သို့မဟုတ် အခြားသော အစောင့်အရှောက် အကူအညီဖြင့် နေထိုင်နေရခြင်းကြောင့် အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းမျိုးမရှိဘဲ မိမိတို့အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအပေါ် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးသည့် အလုပ်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ရသည်ကိုလည်း ဂုဏ်ယူလျက်ရှိနေပါသည်။
The reason why I love KBZ Bank is that KBZ feels like my second home and my colleagues are all from very diverse backgrounds which keeps things interesting and gives me useful insights about people that I can apply to my work. Every day is challenging for me as I deal with customers with very different needs and backgrounds. Finding solutions to their problems gives me job satisfaction.
Soe Myat Myat Aung
3 years seniority has earned me experience that money cannot buy. As we are responsible for all aspects of marketing the environment I work in is varied and dynamic - no two days are the same. One day I may be traveling on location behind the scenes organizingalaunch,aphotographic or TV shoot. The next day I might be in front of the camera as it's our ethos to use our own staff for models!
Ma Nay Nann Yi
I've always wanted to work in the finance sector and working for the leading bank was my dream. I'm in the Accounts Department and at first I was nervous to recognize all the Account codes, but it got easier later because my colleagues and my seniors helped me like they were my own family so I'm lucky to have some great mentors here.Working for KBZ Bank has helped my confidence grow.